DAGAALKA DIGAAGGA (ROOSTERS) CHAMO: SHARAXAAD KU SAABSAN INAAD GURIGA KU HAYSAN KARTO - BEERAHA DIGAAGA
Dagaalka digaagga wuxuu shimmaa Shamo
Waqtigan xaadirka ah, naadiyada loo yaqaan 'cock fighting' ayaa laga heli karaa magaalooyinka waawayn ee Midowga Yurub. Tani waa muuqaal qurux badan oo xiiso leh oo taageeray dhamaan taageerayaasha adduunka oo dhan waxaana si tartiib tartiib ah naga siiyay nasiib wanaag. Mid ka mid ah saraakiisha la aqoonsan yahay ee ka mid ah shimbiraha dagaalku waa jajab.
Taariikhda la jebiyey
"Shamo" waa ereyga "Siam" oo macnaheedu yahay "Thailand". Ma nooc nooc ka mid ah Malay taranka of digaagga. Shimbirkan ayaa lagu soo bandhigay Japan tan iyo qarnigii 17aad, waxaana muuqday Jarmalka horraantii 50aad ee qarnigii 20aad. Shamo dhalashada Shamo wuxuu yimid dhulkii hore ee Soofiyeeti ee dhammaadkii qarnigii 20aad.
Ma taqaanaa? Digaagga Koonfurta Maraykanka ee jilicsan ayaa ku dhalanaya araukana ukumo buluug ah.
Macluumaadka dibadda iyo jirka
La dagaallama digaagga shamaca Shamac waxay leeyihiin muuqaal ah oo aan toos ahayn, murqaha laabta. Boorashka ayaa aad u gaaban, wuxuu ku habboon yahay jirka, shimbirta ayaa si toos ah u ilaalisa dhabarkeeda, si ku dhow vertically. Kuwa soo socda waa caadi dabeecaddan oo ah noocyadan:
madaxa ayaa leh qaab aad u dheer, gadaasha madaxa waa, sida ay ahayd, "gooyay";
indhuhu waxay ku fadhaan qotodheer xagga dhakada, waxaa jira suno la kobciyey;
Muruqyada dhabta ah ee aadka u horumaray;
shanlada waxay leedahay qaabka lowska;
Guntimaha ayaa ku dhawaad ​​aan la qallajin karin, cunaha midabka cas casu wuxuu gaarayaa qoorta;
qoortu waxay leedahay qallaf qeexan, xajmiga xayawaanku wuxuu u eg yahay shanlo;
laabta waa mid ballaaran oo si aad ah loo horumariyey, marwalba waa uu dhashay;
on dhabarka awood leh oo horumarineed ayaa roodhiga aad u yar;
Baalasha gaaban waxay soo gaadheen lafaha dhammaynta;
qoyaan aad u dheer ayaa si joogto ah loo yareeyaa oo waxoogaa yaraa;
lugaha shimbirku waa kuwo dheer oo awood leh, waxay leeyihiin hindisooyin fiiqan, farta gadaal si dhab ah ayaa loo cadaadiyaa dhulka;
tayada aan la aqbali Karin ee caansaankani waa ciribta ciribta, oo si xooggan u wareegsan.
Madow ama madow waxaa loo tixgeliyaa sida caadiga ah ee midabkeedu yahay midabka noocaan ah ee loogu talagalay tarankan iyadoo la isku daboolayo midabada casaan, cawl, duudduub iyo qamadi.
Ga Dong Tao, ama "Chicken Elephant" - oo ah nooc digaag ah, oo laga soo iibsaday Vietnam si looga qaybgalo cufka; waxay kala duwan yihiin bambooyin waaweyn iyo muuqaal muuqaal leh. Hadda waxay ku koraan ujeedooyin qurxoon iyo hilibka, sida dareen weyn.
Sidoo kale for Chamo midabkani waa mid caadi ah:
Shuruudda ugu weyn ee midabaynta shimbirta - waa in si cad loo muujiyo.
Shamo waa shimbir xooggan oo leh muruqyo la soo saaro, waxaa muhiim u ah adkaysigeeda weyn. Shukriyeyaashu waxay calaamad u yihiin gardarrada sarraysa, labaduba waxay la xiriiraan wakiilo ka socda tarankooda, iyo shimbiraha kale. Kuwani waa dagaalyahanno aad u fiican, calaamadaha muuqda ee ku jira dagaalka, geesinimada, geesinimada iyo la dagaalanka sirdoonka.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo jimicsiga baqashada furan ee furan ama baqashooyin waaweyn, maadaama aysan ku noolaan karin dagaal la'aan oo ay awood u leeyihiin inay waxyeeleeyaan midba midka kale inta lagu jiro dayactirka wadajirka ah.
Digaagga noocaan ah waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood oo culus:
Miisaanka weyn ee o-shamac, miisaanka qumbaha - 4-5 kg, digaag - 3 kg, ukumulku waa buni, miisaankiisu waa 60 g.
Celceliska chu-chamo, musqulo waxay leeyihiin miisaanka 3-4 kg, digaaggu wuxuu miisaamaa 2.5 kg, midabka ukunta waa bunni, miisaanka waa qiyaastii 40 g;
Dwarf ko-chamo, miyirku wuxuu culeyskiisu yahay 1-1.2 kg, digaaguna waa qiyaastii 800 g, miisaanka ukumuhu wuxuu kudhow yahay 35 g.
Shimbir chamo ayaa awood u leh in ay soo saarto ilaa 60 ukumood sanadkiiba. Si aad u dhigto digaag waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro xaaladaha ugu raaxada leh ee loo isticmaalo ukumaha ukumaynta dhamaadka jiilaalka iyo horraanta gu'ga. Tani waa habka kaliya ee lagu uruuriyo ukunta marka la isugeynayo, ka dibna fariisigooda ha ku fadhiiso ama ukumo ukumo.
Sababtoo ah mawduucyadeeda aan la xakameynin, digaagaha caanahan waa kuwo aad u firfircoon oo firfircoon. Ma aha kuwo ku haboon kootada, sababtoo ah waxay ka maqan yihiin sabirka ah in ay u fariistaan ​​ukumaha illaa dhammaadka asaasiga ah ee geeddi-socodka - hirgelinta digaagga. Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxaad go'aansataa inaad isticmaasho dhirtaas si aad u dillaacdo, waa in loo sameeyaa si gooni u gooni ah, oo aan waxba ka tarin haweenka uurka leh. Quama Shamo size weyn, sababtoo ah xasillooni darrada iyo macquulnimada waxay burburin kartaa ukunta. Tan iyo markii ay ukunta digaagga ee noocaan ah horayba u ahayd mid aad u yar, waxaa fiican in aan halis galin, in lagu aamino dhalashada ee digaagga ee kiniisada.
Markaad dooratid xariirka guriga, fiiro gaar ah u yeelo qalabka sida "Layer", "Horumarka Ideal", "Cinderella", "Blitz".
Dhibaatada ah ee taranta guriga
Janaayo waa waqtiga ugu wanaagsan ee loo adeegsanayo isugeynta. Dhammaadka sanadka, digaagga taranka ayaa la doortaa waxayna bilaabaan inay ku quudiyaan cuntooyinka nafaqada sare leh. Nafaqada noocan oo kale ah, isku dar ah iyo miro ah (0.025 kg halkii qof) ayaa loo isticmaalaa. Digaagga soo kordhay waxaa lagu hayaa diiran heerkul ah 32-34 ° C. Shamo waxay ku nooshahay Koonfur Asiya. Laga soo bilaabo tan waxay u hoggansan tahay in shimbirta ay tahay halkii thermophilic, waayo jirkeeda caadiga ah waxay u baahan tahay diirimaad.
Xitaa chicks yar yar waxaad u baahan tahay meel weyn. Gardarada iyo dagaalka sifooyinka shimbiraha waxay ka muuqdaan da 'yar. Waxaa wanaagsan in digaagga si gooni gooni ah loo ilaaliyo, looma hadli karo wadaagida xayawaanka kale, sida horeyba loo yiri, Chamo ma la midoobin xitaa saaxiibadood. Waxaa haboon in la daawado shimbiraha koraya. Cunuga wuxuu u baahan yahay in si taxadar leh loo ilaaliyo loona ilaaliyo nadaafadda.
Ma taqaanaa? Xuduudda Boqortooyada Ruushka ee cockfights waxay ka soo jeeddaa badhtamaha qarniga XIX. Dhamaan bandhigyada bandhigga digaaga ee 1878, dadka ugu caansan waxay ahaayeen dagaalo boobo. Dhawaan dhammaadka dhacdadan, Ruushka Ruushka ah ayaa la aasaasay, waxaa aasaasay aasaasayaashii dhididka cayayaanka ee Boqortooyada Ruushka.
Shamo - oo dhan, kor u qaadista musqusha, looma diidi karin quudin ama keliya dalag. Sida ciyaartoyda isboortiga, waa waxay ubaahantahay cunto gaar ahTilmaamaha ugu muhiimsan ee ay ku qoran yihiin erayo kooban:
Isla markiiba dhalashada ka dib, digaagga waxaa lagu quudin karaa oo kaliya mono feed. Si looga fogaado koritaanka aan caadi ahayn ee borotiinka ee dietinta digaagga ayaa la yareeyey. Fiitamiinada ayaa lagu daraa quudinta toddobaadka. Chicks waa inay mar walba biyo nadiif ah helaan.
Marka la gaaro da'da 2 asbuuc, cagaarka (lettuce, nettle, iwm.) Waxaa lagu soo bandhigay cuntada digaagga, laakiin daryeelka waa in la qaataa si loo hubiyo in qadarka wax soo saarku aanu ka badnayn heerka.
Ka dib shimbiraha ayaa la garaacaa, waxaa loo wareejiyaa isku darka isku darka ah ee laamiyada yaryar (1: 1). Cuntadani waxay ku siineysaa baadho culeyska lagama maarmaanka ah.
Sida loo tababaro musqulaha
Tababbarka qashinka dagaalka wuxuu bilaabmaa da'da 3 bilood. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee la xoojiyo xilliga tababarka waa:
Dareemid. Isticmaal culeyska lugaha shimbir ee culeyskiisu yahay 0,3 kg.
Bounce. Waxay tababbaraan iyagoo gacan ka geysanaya gadaashooda gadaashooda, taas oo ka dhigaysa boodhka mustaqbalka si looga fogaado inuu dhaco.
Xawaaraha. Si loo horumariyo tayadaas, isticmaal wheel wheel (sida mid ka mid ah kuwaas oo hamsters run).
Kaliya hal mastar waa in lagu tababaro shimbirta. Haddii kale, natiijadu ma noqon doonto ama waxay noqon doontaa mid gabi ahaanba aan la saadaalin Karin (qiime xun).
Waxaa sidoo kale xiiso leh in lagu barto leh noocyada kala duwan ee digaagga ee digaagga: silk Shiineys ah, sybright, cemeni ayam, pavlovskaya, dhaqaale lacageed.
Badanaa, waayo-aragnimada ugu horeysa ee Shamo waxay noqotaa "dagaalka hooska". Sidaa daraadeed, dagaalku wuxuu horumariyaa farxad iyo ruux jinsi ah, wuxuu naftiisa ku cabsiiyaa cabsi iyo in uu ogaado inuusan ka jilicsanayn kan ka soo horjeeda. Fikrad gaar ah ayaa loo bixiyaa cirridka tababarka iyo guluubka. Kalsooni buuxda ayaa la saarayaa dagaal. Shimbir buka, sida shimbirta ah marka la gooyo, lama dagaalami karo. Ka hor inta aan la dagaalamin, digaaggu waa inay gaajoodaan, sidaas darteed waxay noqon doontaa dagaal badan.
Video oo ku saabsan shamo shimbir
La dagaallama shilalka
Faahfaahinta ku saabsan Chamo jilicsan
waxay bilaabaan inay garaacaan si xoog leh 3-4 bilood ka dib. kuwa waawayni waxay labadoodaba kuxiraan baqshiish, laakiin waxaan qof walba u sii deynayaa socodka. wadada waxaa lagu hayaa kooxo. gaar ahaan si taxadar leh u soco
Xayawaanka yaryar waxay dalbanayaan kuleylka, shimbirta qaangaarkuna aad ayay u adag tahay. Dadka qaangaarka ah waxay jiilaal qabaan iyada oo aan wax dhibaato ahi ka jirin hoyga aan nadiifka ahayn (biyaha ayaa la qaboojiyey habeenkii). Waxa ugu muhiimsan waa qallalan oo aan lahayn qoraalo
Waa in aanad daweynin dufcada dufcadda oo leh calaamad aad u cakiran. Tani waa dhaqan qadiimi ah, qayb ka mid ah hidaha dhaqanka ee Koonfur Bari Asiya, sida kubbadda Isbaanishka. Intaa waxaa dheer, sannadihii la soo dhaafay, dagaalladu waxay noqdeen kuwo adag oo aan dhif aheyn oo dhif ah ayay ku dhamaataa dhaawacyo. Badanaa dagaalku waa la dagaallamaa ka hor intaan la duulin mid ka mid ah ka qaybgalayaasha.